बलिउड कलाकारका लागि लाखौं खर्च गरेर बनाइएका कपडा सु’टिङ स’किएपछि के गरिन्छ ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियबलिउड कलाकारका लागि लाखौं खर्च गरेर बनाइएका कपडा सु’टिङ स’किएपछि के गरिन्छ ?
बलिउड कलाकारका लागि लाखौं खर्च गरेर बनाइएका कपडा सु’टिङ स’किएपछि के गरिन्छ ?
काठमाडौँ। बलिउड चलचित्र उद्योग सायद विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चलचित्र उद्योग मध्ये एक हो । बलिउड चलचित्र बनाउँदा ख’र्चिने पैसादेखि लिएर कलाकारहरुले प’हिरिने कपडादेखि सेट डिजाइनमा मूल्यबारे बेला बेलामा ब’हस हुने गरेको छ । कलाकारहरुका लागि ख’चिने कपडा र सेट डिजाइनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।बलिउड चलचित्र क्षेत्रको लो’केसन छनौट, निर्देशन, संवाद, पटकथाका लागि मात्र परिचित छैन। चलचित्रमा काम गरिरहेका ठूला कलाकारहरुले लगाएका डि’जाइनर कपडाहरुका लागि पनि बलिउड निकै प’रिचित छ ।
विशेष गरि ठु’ला कलाकारका लागि डिजाइन गरिएका कपडाहरुको ला’गत लाखौंको हुने गर्दछ। यसका साथै नाम चलेका कलाकारहरुले एकपटक एउटा चलचित्रमा प्रयोग गरिसकेको कपडा अर्को चलचित्रमा प्रयोग गरिँदैन। आखिर बलिउडमा ति क’पडाहरुलाई के गरिन्छ ?यो उ’त्सुकताले सायद सबैको मनमा प्रश्न उठेको हुनुपर्दछ। यस प्रश्नको सही र स’टिक जवाफ य’शराज फि’ल्म्सकी स्टा’इलिस्ट आ’यशा ख’न्नाले एक अन्तर्वार्तामा दिइएकी थिइन्। चलचित्रमा कलाकारहरुले लगाएका प्रायः कपडाहरुलाई स’म्हालेर राखिएको हुन्छ।
यससँगै उक्त कपडामा कुन चलचित्रको लागि प्रयोग गरिएको थाहा पाउन कपडामा ट्या’ग लगाइएको हुन्छ। र प्रायःजसो यी कपडाहरुलाइ मि’क्स म्या’च गरेर जु’नियर कलाकारहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी यी कपडाहरू उही प्रो’डक्शन हा’उसका अन्य फि’ल्महरूमा पनि प्रयोग गरिने आयशा ख’न्नाले बताइन्। उनले भनिन्, ’दर्शकहरूले चा’ल नपाउन भन्दै कपडाहरु अन्य पा’त्रहरूमा प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याइन्छ। तर, यो आवश्यक छैन कि यो प्रत्येक क’पडालाई अरु जु’नियर क’लाकारहरुमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने, किनभने केही ठूला कलाकारहरुलाई उक्त कपडा म’नपरेको खण्डमा कहिले काहीँ आफैँले पनि राख्न सक्छन्। ’
ठूला कलाकारका लागि विशेष गरि डि’जाइन गरिएको कपडाहरु कहिले काहीँ डि’जाइनर कम्पनीले चलचित्र रि’लिज भए प’श्चात फि’र्ता पनि लाने गरेका छन्। यसरी फि’र्ता लागिएको कपडाहरुलाई लि’लामी पनि गरिन्छ। चलचित्र रो’बोटमा र’जनीकान्त र ऐश्वर्या रायले लगाएका कपडाहरु एक गै’रसरकारी सं’स्थाका लागि रकम जु’टाउन अ’नलाइन लि’लामी गरिएको थियो।